Waa Maxay Guurka Xawilaada, Maxaadse ka taqaanaa &Bal Kaalay oo inala faa iideyso - iftineducation.com
iftineducation.com – Guurka xawilaada ah waa guurka waayadaan dambe la caadiyeestay, isla-markaasna noqday middka intabadan gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka somaliya iyo weliba kuwa ku nool dalalka deriska ah loo isticmaalo qaab xawilaad ah.
Waxaana intabadan isticmaalo ragga ku nool dalalka reer-galbeedka islamarkaasna u soo guurdoonta, hablaha ka dhashay reeraha tabartay yar iyo kuwa aan aqoont leheen.
Waayo gabadha hadii ay tahay qof caqil leh aqoon dheeraadna leh lama qaldikaro, Guurkaan xawilaada ah ee nin jooga ameerika,Yurub iyo qaaradaha kale ee aduunka ayaa wuxu soo dalbanaa gabar joogta somaali ama dalalka deriska la ah islamarkaasna ay ku qaxeen somalibadan, wuxuu soo shubaa lacag wuxuna oranaya gabdha ugu jirta reerka ayan rabaa tusaalo Nairob waa meesha ugu daran ee arrinkaan laga caadiyeestay, waxad arkeysaa ninkasta ee ka yimaado dalalka reer-galbeedka ah wuxu u yimaadaa in uu guursado, lakin boqolkiiba 25% ayaa daacadka ah.
Intakale ujeedo ayeyka wataan,waa sida la isku raay lakin dadkii waxaa laga raacay dibad iyo lacag allahayo naga soo gaar. islamarka ay arkaan gabdha reerkooda kama fekeraan ninkaan muxuu yahay. Balse waxay si hal&;halleel ah loo siiyaa gabdha, ninka bixiye lacagta badan, waxaana laga yaabaa inay gabdhu jeceshahay ninkale ama xiriir la leedahay qofkale.
Deetana lagu yiraahdaa ninkaan ayaa ku kaxaynayo isagaa lacag leh maxaadku faleeysaa mid aan beerikiisa beer&;uwehelinin oo jooga meeshaan dhibka badan waa afrikee, ka bax waxaas, waxaaba laga yaabaa inay sidii ku qancado islamarkaasna ayba ilaawdaa jeceylkeedi ay inbadan wadda socdeen ama ay ballan lahaayeen, waayo waxaa timid mid dibada laga soo xawilay
marka aan eegna qisooyinka lagu soo daabaca shabkada Badweyn.com ayaa inta badan saan ognahay waxay ku dhamaadaan guuldaro taas oo ay sabab u tahay fikradaan laso xawilay ama aan iraahdee guurka xawilaadda ah. kaas oo dhalinyaro badan u geestay dhaawc halka qaarna uu ku sababay islamarkaasna ay u dhinteen qoysas badana aku kala fogaadeen.
Hadaba akhrista-yaasheena sharafta leh waxan dhexdhigayaa suaalahaan ah maxaytahay qasaarah uu u geesta dhaliyarada Somaaliyeed guurkaan xawilaada ah?
Mase dhab-baa in dhalinta jooga wadamadda reer-galbeedka islamarkaasna fara-baxay oo dhaqankoodaka tegay in loo soo raadiyo gabdhaha jooga Somaliya ama dalalka deriska ah sida Kenya iyo meela badan oo ay Somaalida usoo carartay?
Sidee looga hortegi karaa guurkaan xawilaada ah in uu wax yeelo-baahsan ugeesta dhalinyarada mucaashaqiinta ah? Ma jiraan rag lagu guursaday guurkaan xawilaada ah?
Dhamaan su&aalahaasi waxaa jawaabahoodu laga doonaayaa akhrista-yaasha sharafka leh ee ku taxana.